musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kanada Breaking News » VaCanada vanoda kuenda kunze kwenyika
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kanada Breaking News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • Rail Kufamba • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • Shopping • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Ongororo nyowani inowana kuti maCanada vari kusuwa nzendo dzekune dzimwe nyika, ne 87 muzana vachitaura kufamba kuri iko kunobva zvimwe zveyeuko dzavanokoshesa.
Vanenge vana muzvishanu (78 muzana) vevaCanada vakati zvinhu pazvinodzokera pane zvakajairwa, kufamba kwenyika dzakawanda ndicho chimwe chezvinhu zvavanotarisira kuzonyanya.
Vanopfuura hafu yevaCanada - 55 muzana - vakati vane zvakawanda zvekuda kushanya kune dzimwe nyika kupfuura nakare kose.
Asingasviki chikamu chechina chevaCanada - 24 muzana - vakati parizvino vari kuronga rwendo rwekunze mukati memwedzi mitanhatu inotevera.
Mhedzisiro yeongororo yazvino indasitiri inojekesa maonero evafambi veCanada vekunze yakaburitswa nhasi.
Zvakawanikwa zvakafumura kuti nepo vazhinji vevaCanada vanofamba nyika dzepasi rose (58 muzana) vachiramba vakangwarira pamusoro penzendo dzekune dzimwe nyika nekuda kwekukwira kwemusiyano weDelta COVID-19, uye isingasviki chikamu chimwe chete chechina kuronga kuenda kune dzimwe nyika mumwedzi mitanhatu inotevera, kupfuura zvikamu zviviri kubva muzvitatu (78 muzana) zvinoti kufamba kwenyika dzese ndechimwe chezvinhu zvavanotarisira kutarisira apo denda rinodzikama.
Ongororo iyi yakaratidzawo kuti vagari ve Kanadha vari kuzeza kuenda international travel kupfuura vavakidzani vavo vekumaodzanyemba, ne42 muzana yevaAmerica vachironga nzendo kunze kwenyika mumwedzi mitanhatu inotevera, zvichienzaniswa ne24 muzana chete yevaCanada.
Zvichipa izvo zvinogumira pakufamba, inopfuura hafu (55 muzana) yevaCanada parizvino vari kutaura chishuwo chakasimba chekuona nyika kupfuura nakare kose.
Mhinduro dzepamusoro pane izvo zvarasikirwa zvakanyanya nezvekufamba kwenyika dzese zvinosanganisira kuona zvitsva (56 muzana), kusangana nenzvimbo nyowani (53 muzana), kudimbura nekuzorora (53 muzana), uye kudzidza nezve tsika dzakasiyana (52 muzana).
Yakakosha Ongororo Kutsvaga:
87 muzana yevaCanada vanobvumirana kuti kufamba kwenyika dzese kwakavapa ndangariro dzavanonyanya kufarira muhupenyu.